Yulia | Gcina A Isitimela
umbhali: Yulia Egudin
ekhaya > Yulia Egudin
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu Le ikhula phambili ekubeni ngakumbi nokusingqongileyo-friendly iye yavusa ezininzi, kwaye kwatshintsha amaphulo eluhlaza jikelele, kwizixeko ezinkulu nakwiidolophu ezincinane ngokufanayo. Olunye lwemiqondiso emininzi yoku kukukhula kwamandla avuselelekayo kubomi babantu bemihla ngemihla kunye nokusebenza kumanqanaba…
Industrial Engineering, Uhambo loLoliwe
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Best ukudla ukuba adle koololiwe na kule mihla ngokwenene emnandi kakhulu. Ngenxa yokuba koololiwe amaninzi anikezela ngendawo yokuhlala star-5 kunye nokutya kwiklasi yokuqala. Oku kubandakanya ukutya eyenziwe umhlaba abapheki edume. Mhlawumbi uqhele ukufunda ngokutya okumangalisayo kwizikhululo zikaloliwe okanye ubuhle bendalo bakho…
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Iindawo ezingabizi kakhulu zaseYurophu zisisihloko eshushu. Okokuqala, abatyeleli e Europe uyakwazi ukubona yonke into kwi iivenkile zekofu omkhulu kumanxweme ezintle. Ngenxa yokuba izixeko ezifana yaseVenice, eRoma, kunye Paris izigidi abakhenkethi ukuya eYurophu minyaka yonke. Senze uluhlu lwe…
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Olona hambo lude kuloliwe emhlabeni lide kakhulu! Ezi uhambo kungathatha iintsuku eziliqela bayigubungele amawaka eekhilomitha. ke, apha awaya kuthatha ixesha elide eYurophu, Asia, Ostreliya, kanye US. Eli nqaku labhalelwa ukufundisa…
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Bernina Express yenye hambo uloliwe sihle ehlabathini. Okokuqala, Kwi Rauma Line ukusuka Dombas ukuya Andalsnes (Norowe), nawe ube iimbono le ntaba eziphakamileyo. Ngaphezu, ungabona amathambeka eentaba namathafa njengoko udlula eRauma…